Bgba Ígwè | October 2021
Isi > Bgba Ígwè
Kedu ihe a na-akpọ otu ndị na-agba ịnyịnya? peloton
Harley Davidson na-eme igwe? Companylọ ọrụ Harley-Davidson bidoro na mbido 1900, mgbe William S. Enwere, agbanyeghị afọ ise ebe Harley-Davidson na-emeghị ọgba tum tum; ha na-arụ ịnyịnya ígwè. Ugbu a, site n'enyemaka nke ịnyịnya ígwè nke Chicago, ndị ụkwụ abụọ a echefuru echefu alọghachila.
Igwe ndị na-agụ mmanya vaịn na-aba uru? Langley na-ekwu, sị, “Echekwala na ịgba ígwè na-abaghị uru n'ihi na ọ bụ naanị igwe kwụ otu ebe kachasị mma na-eweta ọnụ ahịa dị elu. “A na-ere ihe ka ọtụtụ n'ígwé vintage maka $ 100 na $ 400. Ọbụna ihe mgbe ochie nwere ọmarịcha ihe mgbe ochie, dịka igwe kwụ otu ebe, anaghị agbanwe aka karịa ihe karịrị $ 3,000 na $ 4,000. ”
Ugboro ole ka Wright Brothers mere? 300 ịnyịnya ígwè
onye na-arụ ọrụ igwe
Ọrụ igwe - otu esi eme
Ebee ka emere Cycle Onye Ọrụ?
Crosszọ igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ọgba tum tum gafee mba? Nke a bụ ihe ọ dị ka ya site na nọmba sitere n'elu. Anyị ga-eme atụmatụ na ịgba ịnyịnya ígwè gafee America nke gafere kilomita 4,000 ga-ewe onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 61 iji wuchaa. Bikegbọ ịnyịnya ígwè anyị na-ejide onwe anyị gafee America were ụbọchị 80, anyị kpuchie ihe dị ka kilomita 4,500. 2015 г.
mobile ịgbazi idozi
Ndozi igwe eji eji igwe eme ihe - azịza ya
Ego ole ka igwe kwụ otu ebe na-eri? Dabere na mpaghara gị, nkezi igwe kwụ otu ebe na-efu ihe dị ka $ 60 na $ 100. Ọtụtụ ụlọ ahịa na-enye nhọrọ abụọ - Obere / Basic Tune-elu nke na-efu $ 55 na $ 89 na Isi Isi nke na-efu ihe dị ka $ 119 na $ 150. Ọnụ ego na-adaberekarị na ọrụ ndị dị na ụda ahụ.
Ego ole ka ndị ọrụ igwe kwụ otu ebe na-akwụ ụgwọ kwa elekere? Ọnụ ego ụlọ ahịa nkezi ga-abụ ihe dịka $ 60 / awa. Ọ na-eburu n'uche ọtụtụ ihe - gaa chọta otu barnetts njikwa ọrụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ nke a n'onwe gị na ndị niile na-agbanwe agbanwe. 12 2ам. 2010 г.
Nnukwu ụkwụ igwe - olee otu ị ga-esi kpebie
Kedu ihe kachasị ukwuu na-agba ịnyịnya ígwè? Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ndị okenye na-eji wiilị 26 anụ ọhịa. Obere igwe kwụ otu ebe na-eto eto na-eji wiilị 24. Ogwe ụkwụ 700C (29 nke anụ ọhịa) buru ibu enwewo ọ popularityụ na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya n'etiti ndị na-emepụta igwe.
ihe ịchọ mma igwe
Ihe ịchọ mma igwe - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Kedụ ka m ga-esi chọọ igwe kwụ otu ebe m? Mee ka ogwe aka gị dị mma, jide gị, na ọbụna ọnụ gị na akwụkwọ mmado. ntụpọ n’etiti okirikiri igwe kwụ otu ebe gị iji mepụta usoro.
Kedu ihe kpatara ụtụ igwe kwụ otu ebe na Oregon? Ndị omebe iwu mepụtara ụtụ ụgbọ ịnyịnya ígwè na 2017, dịka akụkụ nke ngwugwu ụtụ ijeri $ 5.3 nke ga-akwụ ụgwọ maka mmelite njem na Oregon. Weebụsaịtị StreetsblogUSA kpọrọ ya 'ụtụ aghụghọ igwe kwụ otu ebe nke na-enwetaghị ebumnuche njem njem ọ bụla belụsọ na-achọsi ike maka igwe kwụ otu ebe ọhụrụ.' 12 дек. Chukwuemeka odumegwu ojukwu 2018
na-eji igwe kwụ otu ebe
Iberibe a ịnyịnya ígwè - pragmatic ngwọta
Ego ole ka ọ na-eri iji weta igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ elu? Dabere na ụgbọelu gị na ebe ị na-aga, iji ịnyịnya ígwè na-efe efe nwere ike ịdị ihe dị ka $ 30 ma ọ bụ ihe ruru $ 300 n'otu ụzọ. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem, ọ bara uru ịme ihe omume ụlọ akwụkwọ gị. Tiketi dị ọnụ ala karịa n'otu ụgbọ elu nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na onye ọzọ akwụ ụgwọ ụgwọ igwe kwụ otu ebe. Mee 22, 2019
marin igwe nyocha
Nyocha Marin igwe igwe - olee otu ị si edozi
Ọ bụ Marin bike bụ ezigbo akara? Ee, igwe Marin dị ezigbo mma. Marin na-eji naanị carbon, aluminom, na ihe igwe kachasị mma na imepụta okpokolo agba ha, tinyere ihe ndị nwere ntụkwasị obi sitere na Shimano, SRAM, na ụdị ndị ọzọ ama ama. A na-eme igwe igwe Marin ka ha kwụsị, n'agbanyeghị ma ị ga-enweta ọkwa ntinye, etiti, ma ọ bụ ihe atụ dị elu. 21 июн. 2021 г.
otu esi ebu ụgbọ ịnyịnya
Etu esi ebu ụgbọ ịnyịnya ígwè - ihe eji eme ihe
Ego ole ka ọ na-efu iji ụgbọ mmiri? Ọnụahịa nke mbufe igwe kwụ otu ebe dịgasị dabere na ọrụ ọrụ ịchọrọ, yana ọrụ na ndị na-eweta mbupu ị họọrọ. Na-atụ anya ebe ọ bụla site na ihe dị ka $ 50 (obere oge, ụgbọ mmiri dị nwayọ, ma na-eburu ngwongwo gị) ruo ihe dị ka $ 250 (ogologo dị anya, mbupu ngwa ngwa, ndị ọrụ aka juru) .11 апр. 2021 г.
jụụ igwe aghụghọ
Ngwurugwu igwe oyi - mkpebi bara uru
Kedu ihe kachasị mfe na igwe kwụ otu ebe? Stepkwụ na Thekwụ 1: The Slide Ok anyị na-amalite site na isi ihe igosipụta ị nwere ike ịme, na-atọ ọchị mgbe niile na ala na ụbọchị mmiri, ọ bụkwa ihe kachasị mfe ịdọpụ. Nzọụkwụ 2: The Wheelie Nzọụkwụ 3: Stoppie ma ọ bụ Endo. Nzọụkwụ 4: Bunnyhop. Nzọụkwụ 5: ịwụpụ. Nzọụkwụ 6: Mpekere ndị ọzọ na Ibe 180 Comments.
igwe eletrik na-agbanwe
Bgbanwe igwe eletrik - chọọ ngwọta
Ngwongwo igwe eletrọniki ọ bara uru? “Kpọmkwem, 'McCarthy na-ekwu. “Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere mmerụ ahụ, aka merụrụ ahụ, ihe ọ bụla nwere ike ime ka o siere gị ike ịgba ịnyịnya ígwè, ịgbanwee kọmputa nwere ike inye aka. Ọ na-arụ ọrụ otu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere aka oyi ma ọ bụ nnukwu aka. Ọ bụrụ na ị chọghị dexterity n'ihi na ọ dị mfe. ”21 July 2020 м.
Ọnọdụ idozi igwe kwụ otu ebe - chọọ nyocha
Ihe nrụzi igwe kwụ otu ebe ọ bara uru? Don'tchọghị mkpa idozi igwe kwụ otu ebe iji lekọta nke kachasị arụ ọrụ-ị sụba yinye gị, ịgbanye taya-mana ozugbo ịmalitere idozi onwe gị ma ọ bụ iji eriri rụọ ọrụ, nwee ụzọ iji dozie igwe kwụ otu ebe mgbe ụkwụ ya na-aga. si n'ala bụ ihe dị oke mkpa. Ọkt 15, 2020
Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè - ngwọta na-eme ihe omume
Kedu ụgbọ ịnyịnya kacha mma ị ga-aga n'okporo ụzọ? Bikgbọ okporo ígwè ndị kachasị mma maka ịgba n'okporo ụzọ dị larịị. Ugba igwe ugwu kachasị mma maka ịnya n'okporo ụzọ. Ngwakọ igwe ngwakọ bụ ihe a ma ama maka ndị na-ebugharị igwe kwụ otu ebe, n'ihi ntụgharị ha. A na-ewukwasị anyịnya igwe na-aga n'okporo ụzọ na-emeghị njem, ma na-emekwa ndị njem mara mma maka okporo ụzọ obodo ndị siri ike.